Dr. Cabdiraxmaan Max’ed Cabdiraxmaan | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Korona fayrus waa koox cudur-dhaliyayaal ah kuwaas oo khatar baahsan gaadhsiin kara nolosha dadka iyo xayaankaba isla markaana si fudud iskaga gudbi kara qaaradaha dunida. Haddaba, novel (new) korona fayrus ( 2019-nCoV) oo ah qayb hoosaad ka mid ah fayraskan isla markaana ah nooca maanta (2020) dunida khatarta baahsan ka gaystay (Pandemic disease) ayaa waxa markii u horraysay lagu arkay bukaan uu haleelay bishii December ee 2019 magaalada Wuhan ee dalka China. In kasta oo aan si cad loo xaqiijin halka uu uga soo gudbay cudurku bukaankan (Mode of transmission) haddana waxa la aaminsan yahay in uu uga soo gudbay …
Dhukaanka oo sidoo kale loo yaqaano magac hindi ah oo la dhaho “Surra” waa xanuun ku dhaca geela, laakiin waxa uu sidoo kale saamayn karaa lo’da, fardaha, dameeraha iyo dadka.. Geelu waa xoolaha ugu badan ee cudurkani lagu yaqaano. sidoo kale xoolaha ugu nugul qaaditaanka cudurkani waa qooblayda (fardaha,dameeraha iyo baqlaha), sidaas si la mid ah cudurkani wuu ku dhici karaa adhiga iyo lo’da, iyaga oo aan wax calaamado ah oo lagu garto muujinayn. Sidee ayuu ku gudbaa cudurkani? Waxa keena cudurkan mid ka mid ah noolayaasha yar yar ee aynu u naqaano protozoa “T. evansi “, waxaana fidiya nooca cayayaan …
Cudurkan ay soomaalidu u taqaan furuqa lo’da, waa xanuun inta badan ku dhaca xoolaha aynu dhaqano gaar ahaan Lo’da, sidoo kale waxa uu ku dhici karaa shimbiraha ay digaagu ka mid yihiin. Xanuunkan waxa keena mid ka mid ah fayrasyada xanuun dhaliyaasha ah kaas oo loo yaqaan ” Poxviridae, genus Capripoxvirus” Sidee ayuu ku gudbaa cudurkani? Cudurkan waxa door wayn ka qaata gudbintiisa cayayaanka oo qaniina bukaanka cudurkani hayo, isla markaana u gudbiya xoolaha caafimaadka qaba. Maxaa lagu garan karaa cudurkan? Xummad Nabaro dheecaan leh oo ka soo baxa dhamaan jidhka neefka . Dhareer, xummad iyo dareerayaal indhah ka yimaadda …
Cudurkan ay soomaalidu u taqaan furuqa, waa xanuun inta badan ku dhaca xoolaha aynu dhaqano ee adhiga (Riyaha iyo Idaha) sidoo kale waxa uu ku dhici karaa shimbiraha ay digaagu ka mid yihiin. Xanuunkan waxa keena mid ka mid ah fayrasyada xanuun dhaliyaasha ah kaas oo loo yaqaan ” Poxviridae, genus Capripoxvirus” Sidee ayuu ku gudbaa cudurkani? Haddaba xanuunkani waxa uu ku gudbaa taabashada nabarada, quudashada caanaha, saxarrada, kaadida iyo dhareerka bukaanka . Maxaa lagu garan karaa cudurkan? Nabaro dheecaan leh oo ka soo baxa dhamaan jidhka neefka . Dhareer, xummad iyo dareerayaal indhaha ka yimaada bukaanka.. Qanjo barar iyo …
Cudurkan loo yaqaan magacan aynu sare ku xusnay waa xanuun inta badan la soo darsa wakhtiyada ay xooluhu ku jiraan socdaalka, isla markaana ay dareemaan diiqadda iyo hawo yaraanta. Waxa keena cudurkan bakteeriyada nooca loo yaqaan “pasteurella multocida”. waxaana uu inta badan saameeyaa lo’da. Sidee ayuu ku gudbaa cudurkani? Cudurkani waxa uu ku gudbaa dareerayaasha bukaanka afkiisa ka yimaada sida dhareerka, daaqa ay xooluhu wadaagaan iyo neefsiga tooska ah. Maxaa lagu garan karaa cudurkan? Cudurkan waxa lagu karan karaa astaamahan soo socda. xummad daran oo neefka lagu arko shuban iyo dareere sanka ah. carrabka oo barar lagu arko, hawo qaadashada …
Cudurka cabeebku waa xanuun ku dhaca Lo’da, doofaarka, idaha, riyaha. Xanuunkan waxa keena cudur dhaliyaha loo yaqaan fayraska, gaar ahaan nooca “Aphtho virus” haddaba waxa jira todobba nooc oo jeermiskani leeyahay mid kastaana xanuunka gaar ahaantiisa u sababo sida (Nooca A,O,E, Asia,South 1,2,3) mid kastaana waxa uu leeyahay tallaal u gaar ah oo lagaga hortago. Xanuukani xoolahan kala duwan astaamo kala gedisan ayuu ku leehayay marka uu hayo, sida lo’da oo ah xoolaha ugu badan ee calaamadihiisa lagu arki karo, doofaarka oo ah xanuun fidiyaha ugu badan wakhtiga uu jeermisku jidhkiisa ku jiro, nooca ugu dambeeya oo ah adhiga (idaha …
Xanuunka garbo gooye waa xanuun ku dhaca Lo’da, Riyaha iyo idaha, sidoo kalena khatar baahsan ku leh waylaha yar yar ee Lo’da, taas oo ay keento mid ka mid ah bakteeriyooyinka jidhka sunta ku sameeya ee la dhaho “Clostridium chauvoei” bakteeriyadan oo caadiyan ku noolaan karta carrada korkeeda wakhti badan. Xanuunkani waxa uu ku dhacaa waylaha da’doodu u dhaxayso 6 bilood ilaa 2 sanno, sidoo kale xanuunkan waxa la arki karaa wakhti kasta oo sannadka ka mid ah, haba u badnaato wakhtiga kullaylaha iyo bilaha huurku jiro. Sidee ayuu ku gudbaa cudurkani? Cudurkani waxa ku gudbaa ama ay qaadi karaan …
Cudurkan sambabka adhigu waa cudur ku dhaca adhiga (Idaha, Riyaha), waxaana keena nooca bakteeriyo ee loo yaqaan “Mycoplasma” cudur dhaliyahani kuma noolaan karo xoolaha dushooda wax ka badan 3 cisho. Cudurkani waxa uu asiibaa habdhiska neefsiga, gaar ahaan sida magaca ka muuqata sambabada. Cudurkan waxa ay isku mid yihiin cudurkii hore ee ay soo ku soo xusnay xaga sare, kaliya waxa ay ku kala duwan yihiin xoolaha ay saamaynayaan inkasta oo cudur dhaliyuhu isku dhaw yahay xaga abla-ablaynta ama u abtirinta. Qaabka uu cudurkani ku gudbo, astaamaha bukaanka lagu arki karo ( wakhtiga uu nool yahay ama uu dhinto), cudurada …
Waa maxay cudurka Daba ka-ruubku? Xanuunkaan Soomaalidu u taqaano daba ka-ruubka waa xanuun ku dhaca Lo’da iyo buufalada, waxaana keena nooca xanuun dhaliyaha fayras ee loo yaqaan “Rinder pest virus.” Siddii aynu hore u soo xusnay xanuunkaan waxa ay aad iskugu dhaw yihiin cudurka loo yaqaan susunka,. Sidee buu ku gudbaa cudurkani? Cudurkan waxa la iskugu gudbin karaa taabashada tooska ah, cuntada iyo cabitaanka la wadaago, neefsiga iyo waliba dareerayaasha kale ee bukaanka ka soo baxa sida saxarrada wasakhaysan. Maxaa lagu garan karaa cudurkan? Cudurkani waxa uu caan ku yahay oo lagu garan karaa calaamadahan hoose: Dhimasho aad u sarraysa …
Waa maxay cudurka susunku? Cudurkan susunka ay soomaalidu u taqaan waxa keena fayras la dhaho (peste des petits ruminantes virus). Waa xanuun ku dhaca inta badan Riyaha, dhimasho bandanna ku keena, sidaas si la mid ah waxa uu ku dhacaa Idaha inkasta oo aanu ku badnayn iyaga. Sidee buu ku gudbaa cudurkani? Cudurkani waxa uu ku gudbaa taabashada tooska ah ee ka dhex dhacda xoolaha, gaar ahaan dareerayaasha kala duwan ee ka soo baxa xoolaha sida, dhareerka, waxa kale oo cudurkani in uu fido ka qayb qaadata ganacsiga ay xooluhu ugu kala gudbaan waddamada, cuntada iyo biyaha ay wadaagaan neefka …